इन्डोनेसियामा बाढी पहिरोको उपद्रव !  Hamrosandesh.com
इन्डोनेसियामा बाढी पहिरोको उपद्रव !
इन्डोनेसिया, माघ १० ।
इन्डोनेसियामा हालै आएको बाढी र पहिरोमा परी २६ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त बाढी–पहिरोमा करिब २४ जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको खोजी कार्य व्यापक रुपमा जारी रहेको त्यहाँको प्रकोप व्यवस्थापन अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
उक्त द्वीपका नौ ओटा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षा र बाढीको कारण जलमग्न भएपछि तीन हजार भन्दा बढी नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् । यसका साथै कम्तीमा ४६ जना घाइते भएका र उनीहरुको स्थानीय अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा उपचार भइरहेको एपीएफले जनाएको छ ।